warkii.com » Solsjaer Oo Daboolka Ka Qaaday Sidii Uu Cristiano Ronaldo Uga Caawiyey Saxeexa Bruno Fernandes & Xogta Cusub Ee Uu Soo Bandhigay
Solsjaer Oo Daboolka Ka Qaaday Sidii Uu Cristiano Ronaldo Uga Caawiyey Saxeexa Bruno Fernandes & Xogta Cusub Ee Uu Soo Bandhigay
Tababaraha Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ayaa shaaciyey in xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo uu ka caawiyey naadigiisa sidii ay ula soo saxeexan lahaayeen Bruno Fernandes bishii January ee sannadkan, markaas oo ay kala soo wareegeen Sporting Lisbon.
Manchester United oo aan laga badin 17 ciyaarood oo xidhiidh ah oo kasoo bilaabmay dhamaadka bishii January, ayaa isku rogtay koox ka duwan sidii ay hore u ahayd, waxaanay lasoo baxday kubbad qurux badan iyo goolal tiro badan oo ay dhalinayeen, iyadoo ay diiwaangashadeen 17 ciyaarood oo aanay wax guul-darro ah arag.
Waqtigii ay Manchester United diiraddu u saarnayd Fernandes ee aanay heshiiskiisa u dhaqaaqin, waxay garab ka heleen Cristiano Ronaldo oo Old Trafford ka ciyaaray muddadii u dhaxaysay 2003 ilaa 2009, ka hor intii aanu Real Madrid uga wareegin, waxaanu CR7 Ole Gunnar Solskjaer iyo maamulka ka caawiyey go’aan qaadashadii lasoo saxeexashada ciyaartoygan.
Solskjaer waxa uu qirtay inuu kala xidhiidhay Cristiano Ronaldo macluumaadka la xidhiidha Fernandes oo ay wax ka weydiiyeen, kaddibna warbixintii uu siiyey ay ku go’aan qaateen, waxaanu yidhi: “Cristiano ayaa ii ahaa dariiq fudud oo aan sii mari karayay, waxna aan ka weydiin karayay arrimaha Bruno Fernandes.
“Aniga oo kaashanaya Patrice Evra, waxaan helay Cristiano, talooyinkiisii iyo halkii uu istaagayna way cad yihiin.”
Halyeygii hore ee Manchester United difaaca uga ciyaari jiray ee Rio Ferdinand ayaa isaguna sheegay in Ronaldo uu Manchester United u amaanay kartida iyo awoodda ciyaareed ee uu leeyahay Bruno Fernandes, taas oo uu ku caawin karo haddii uu yimaaddo Old Trafford.